मान्छेलाई तर्साउन सजिलो छैन : ऋचा शर्मा, अभिनेत्री सुनकेशरी::न्युज बिहानी
मान्छेलाई तर्साउन सजिलो छैन : ऋचा शर्मा, अभिनेत्री सुनकेशरी
काठमाडौं । ऋचा शर्मालाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा फरक धारको नेतृत्व गर्ने अभिनेत्रीको रुपमा लिईन्छ । पछिल्लो चलचित्र सुनकेशरीमा शीर्ष भूमिकामा रहेकी उनले आफ्नो भूमिका पनि अहिलेसम्म नगरेको फरक स्वादको रहेको बताएकी छिन् । हरर सँगै हास्यप्रदान भनिएको यो चलचित्र गत शुक्रबारबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको छ । सिंगल थिएटरमा ठिकै चलेको चलचित्र मल्टिप्लेक्समा भने राम्रो दर्शक पाईरहेको छ । यसै क्रममा चलचित्रको निर्मातासमेत रहेकी नायिका शर्मासँग न्युज विहानी डट कमको लागि लिईएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
भर्खरै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र सुनकेशरीमा भूतको भूमिकामा देखिनुभयो । उक्त भूमिकामा काम गर्दाको अनुभब कस्तो रह्यो ?
सिरियस्ली लियो भने जुनसुकै भूमिका चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । त्यसो त म चुनौतिपूर्ण भूमिका गर्न नै रुचि राख्दछु । यस मानेमा सुनकेशरीमा गरेको भूतको भूमिका कुनै नौलो भएन । त्यसबाहेक भूतको गेटअप गर्न निकै गाह्रो भयो । यो निकै झण्झटिलो काम रहेछ । मान्छेहरुलाई तर्साउन सजिलो अबश्य छैन । गेटअप र मेकअप त्यहि अनुसार गर्न नसके आफ्नो भूमिकालाई न्याय गर्न सकिदैन । निकै हार्ड मेकअप गरेर अनुहारको ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्दा एककिसिमको हैरानी भने भयो ।
चलचित्रको शुटिङ कुन कुन स्थानमा भएको थियो ?
यो चलचित्रको सम्पूर्ण शुटिङ अष्ट्रेलियामा भएको हो । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको एउटा गाउँमा चलचित्रको शुटिङ भएको थियो ।
समग्रमा चलचित्र कस्तो बनेको छ, दर्शकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
चलचित्रको लागि हामीहरुले निकै मेहनत गरेका थियौं । अन्य चलचित्र भन्दा हरर चलचित्रको लागि बढि मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मैले यसै चलचित्र निर्माणको क्रममा थाहा पाए । अन्य चलचित्रजस्तो लाउड र धेरै लामो छैन । चलचित्रमा अनावश्यक सिन राखेकै छैनौ । हररको साथै केहि हास्य सिन र रोमान्सका कुराहरु पनि समाबेश छन् । पहिलो हाफमा रबिन्द्र झा बढि फोकस हुनुभएको छ । वहाँ डराउदा पनि दर्शकहरु मनोरञ्जन लिईरहेको पाए । चलचित्र हेर्ने दर्शकहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । चलचित्रले मंगलबारसम्म आउदा १ करोड माथिको कलेक्शन गरेको छ । चलचित्रको माउथ अफ पब्लिसिटी राम्रो भएकोले आगामी दिनमा कलेक्शन अझ आक्रमक हुन्छ भन्ने मेरो आशा रहेको छ ।
चलचित्रको नाम सुनकेशरी कसरी रहन गयो ?
सुनकेशरी अर्पण थापाले लेख्नुभएको कथा हो । कथा अनुसार १ जना बिदेशी कलाकार चाहिने थियो । सुनकेशरी त्यो चलचित्रको मुख्य कलाकारको नाम हो । बास्तवमा सुनको कपाल भएको केटीलाई सुनकेशरी भन्ने लोक चलन थियो । लोक कथामा सुनकेशरीलाई तर्साउने खालको केटीको रुपमा पनि चिनिन्छ । नाम पनि क्याच्चि हुन्छ भनेर चलचित्रको नाम पनि सुनकेशरी नै राख्ने सल्लाहा भएको हो ।
चलचित्र शुटिङका क्रममा तपाईलाई चाँहि डर लागेन ?
हामीहरुले शुटिङ गरेको घर १८८८ मा बनेको हो । हाम्रो नर्मल घरमा त मान्छेहरु जन्मने मर्ने हुन्छ भने त्यो घरले त झन कयौ पुस्ता पार गरिसकेको थियो । त्यस घरमा पनि बिभिन्न केशहरु घटेको कुरा पनि सुन्न आएको थियो । निकै ठूलो त्यो घरमा केवल ३ जना बस्दथे । त्यो घर पनि निकै डरलाग्दो नै थियो । चलचित्रमा पनि दर्शहरु यो घर देखेर पनि डराउनुहुन्छ होला । छायांकनको क्रममा थाहा भयो त्यो घरमा त बस्तबमै तर्साउने रहेछ । निकै शकसले चलचित्रको छायांकन सकाएका थियौं ।
अन्त्यमा दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सुनकेशरी हेर्न आउनुस् , नत्र भुत बनेर तपाईको घरमा आएर तर्साउछु… हाँसो । अब आएर नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुस् भन्ने कुरा बन्द गर्नुपयो । के भन्नुपयो भने यदि ट्रेलरले तपाईलाई आकर्षण गरेको छ भने हामीले नभने पनि तपाईहरुले चलचित्र हेर्नुहुन्छ नै । चलचित्र हेरिसकेपछि पनि आफ्नो प्रतिक्रिया सामाजिक संञ्जालमा पोष्ट गर्नुहुन्छ नै । चलचित्रको माउथ पब्लिसिटिले नै पछिल्लो दिन दर्शक बढिरहनुभएको छ । केहि आलोचना पनि आएका छन् । त्यसलाई म आफुलाई सुधार्ने मौकाको रुपमा लिन्छु ।
२०१८ को उपलब्धीः विश्वको ध्यान नेपालमा
गरिवी निवारण कोषको रकम हिनामिना हुन दिन्न : निर्मल भट्टराई ( अन्तर्वार्ता )